WARBIXIN-Dayaca Ammaanka Boosaaso Ma Dowladdaa, Shacabka Mise Danaha Qabiilka.
March 19, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta, Warbixino 1
Puntlandnews.net (Boosaaso)-Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa isha ugu wayn ee dhaqaalaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, waxaana ku sugan kumanaan ganacsato Soomaaliyeed ah oo ka kala yimid deegaamada Soomaalida.
Tan iyo dhismihii Puntland 1998-dii magaalada Boosaaso waxa ay samaynaysay koboc dhaqaale oo aad u ballaaran waxaana gacan ka geystey shacabka tirada badan ee kunool iyo dekedda magaalada Boosaaso oo dhaqaale ballaaran ka soo xerooday.
Sanadihii ugu dambeeyey magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhayey falalka ammaanka liddiga ku ah waxaana ka dhacay dilal lala beegsaday, isimo dhaqan, culimaa’udiin, saraakiil ciidan, masuuliyiin dowladeed iyo dad kale oo shicib ah.
Falalkaasi intooda badan waxaa masuuliyaddooda sheegta kooxaha Daacish iyo Alshabaab oo ciidanka Puntland ku ugaarsadaan buuraleeyda gobolka Bari, waxaana marar badan ciidanku fashiliyey falal ammaanka lagu waxyeelayn lahaa.
Ciidanka ammaanka Puntland ayaa labadii bilood ee ugu dambeeyey magaalada Kawadey howlgallo dad badan lagu soo xirxiray ayna siweyn u soo dhoweeyeen shacabka kunool magaalada Boosaaso walow ay mudadaasi dheceen saddex dil oo laba kamid ah ciddii ka dambaysay gacanta lagu dhigay.
Dadkii ka dambeeyey maareeyihii DP World ee dekedda Boosaaso iyo mid kamid ah ganacsatada Boosaaso ayaa ciidanka ammaanku gacanta ku soo dhigeen waxaana jirey dil loo geystey AUN Suldaan Bashiir Koonte oo baaritaano lagu hayo.
Haddaba dad badan ayaa rumaysan in dayaca ammaanka Boosaaso uusan ahayn ciidanka ammaanka haseyeeshee uu yahay mid kayimid dadka shacabka ah maadaama ay dadka falalkaasi ka dambeeya ku dhex dhuuntaan laguna difaaco af qabiil iyo arrimo la xiriira awoodda dadka deegaanka iyo inaysan ciidamada kala shaqayn sidii ay ciddii falal ammaan xumo wadda uga hortagaan.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo ayaa sheegay in dadka hantiilayaasha ah ee magaalada Boosaaso lagu kari la’ayahay inay dhistaan dhulka isla markaana ay raali kayihiin dayaca dhanka bilicda ah ee magaalada Boosaaso iyagoo taasi bedelkeeda danaynaya Sandaqad ama Buush uu sheegay inay kiro yar ka qaataan.
Mar uu ka hadlayey ammaanka magaalada wuxuu tusaale u soo qaatay habka shacabka kunool magaalada Garoowe uga shaqeeyaan ammaanka gaar ahaan sidii ay gacanta ugu dhigeen ninkii diley Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax, halka Boosaaso masaajid laga buuxo lagu diley Suldaan Bashiir Koonte iyagoo aysan shacabku wax isku day ah ka samayn.
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa lafilayaa inuu safarkiisa ugu horeeya ee tan iyo markii la doortay uu kaga baxayo caasimadda uu ku tago magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland.
Dayca & folxumada kamuqda magalada xebedka boosaaso waxa ugu wacan dadka degeenka uleh oo ah dad Xasid ah,waxad kawarqabtan Xasidnimadu in aay tahay wax xuun oo Aduun & Akhiro laga deyriyey qofka xasidka ah,midas aya ugu wacan,Bosaaso wa laga guraya waxana isu so haraya inta Xasidiinta ah ha’isku jabeen,hader waxa camirmaya Garoowe & Qardho burtinle,garoonka bosaaso waxa lowarejinaya garoowe Bosaaso waxa isugu haraya xasidiinta,Dekaduna heli mesyso shixnad oo mar dhow waxa furmi doonta dekada garacad,bosaaso waxay u’ekanaysa sidedi hore guryaha laga dhisay & hotelada waxay noqonayan kuwo hawada oo cidla ah.